Tallaabada ugu horreysa waa in la soo gudbiyo warqad laba bog ah oo ujeedadeedu tahay sharaxaadda mashruuca iyo sida tiknoolijiyada ku lugta leh ay u kobcinayso qalabka neerfaha iyo in ay noqoto mid la gaari karo cilmi baaris kale oo gudaha ah.
Warqada ujeedadu waa inay ku jirtaa cinwaanka emailka ee baarayaasha maamulaha iyo cinwaanka mashruuca.
Baarayaasha maamulayaasha ayaa looga baahan doonaa:
Samee magaca isticmaalaha iyo furaha ereygaaga (fadlan sii hayso magacaaga iyo lambarkaaga sirta ah sida aad ugu baahan tahay inta uu socdo geedi socodka)
Dhameystir warqada weedha ee internetka
Kudar sharaxaad mashruuc labo-bog ah oo aan ka badnayn laba bog oo tixraac ah
Sawirada kasta waa in ay ku dhex jiraan labada bog
Sharraxaadda mashruuca iyo tixraacyada waa in lagu dhajiyo hal PDF ah
A guddiga dib u eegista wuxuu qiimeyn doonaa waraaqaha wuxuuna ku martiqaadayaa dhowr musharrixi ah inuu soo gudbiyo codsiyo buuxa. Waqtigaas, marxaladda Heerka Labaad ayaa la bixin doonaa. Talooyinka waxaa lagu qiimeyn doonaa hal-abuurnimada iyo faa'iidada laga helayo habka iyo muhiimadda dhibaatooyinka la xalinayo.
Ka dib marka dib loo eego soo jeedinta, gudigu wuxuu kugula talin doonaa sadex abaalmarin oo loogu talagalay Guddiga Agaasimaha Santuukha Maaliyadda. Guddiga ayaa go'aan ka gaari doona. Abaalmarin kasta wuxuu bixin doonaa $ 100,000 sanadkiiba laba sano.
LOIs waxay ku egtahay Diseembar 2, 2019
Soo-jeedinno dhammaystiran ayaa la qaban doonaa bisha Abriil 27, 2020
Abaalmarinnada waxaa lagu dhawaaqayaa dhammaadka Juun waxayna bilaabmaysaa Agoosto 1, 2020
Tartanka waa mid aad u daran, baarayaasha aan helin abaalmarin waxaa lagu dhiirigelinayaa inay dib u codsadaan.
Musharraxiinta McKnight Technological Innovations ee Abaalmarinta Neuroscience:
Waa in uu ka shaqeynaa hay'ado aan faa'iido doon ahayn oo ku dhex yaal Mareykanka.
Waa inaad qabsataa ballamo waqti buuxa ah oo ah kaaliyeha sare ama sare, sida professor-ka ah ama professor, oo ka shaqeeya hay'adaha gudaha Maraykanka. Cilmi-baarayaasha oo haysta shahaadooyin kale sida cilmi-baaraha cilmi-baarista, kormeeraha professor, dabeecada cilmi-baarista, booqashada professor, ama macallin maahan mid u qalma.
Waa inuu abuuraa farsamooyin cusub ama farsamooyinka farsamooyinka neuroscience siyaabo cusub.
Ma ahan shaqaale ka mid ah Howard Hughes Medical Institute ama cilmi-yaqaanada gudaha barnaamijka gudaha ee Machadka Qaranka ee Caafimaadka.
Ma haawin abaalmarin kale oo McKnight ah oo la xidhiidha abaalmarinta tiknoolajiyadda.
Nidaamka codsigu waa gebi ahaanba internetka. Halkan hoose riix si aad u hesho foomka Heerka Labaad LOI.
LOIs Duration: Diseembar 2, 2019
Hindisaha: Abriil 27, 2020
Maalgalinta Bilowga: Ogast 1, 2020